Iimveliso ze-ESRI, ziphi na zona? - Geofumadas
Le ngenye yemibuzo abantu abaninzi abazibuza yona, emva kwendibano ye-ESRI esiza nayo yonke loo mali yencwadi ezintle kakhulu kodwa ngezihlandlo ezininzi zidala ukudideka malunga noko ndikuhlalayo kwinto endiyifunayo. Injongo yale ngqwalaselo kukubonelela ngokubaluleka kweemveliso ze-ESRI, ukusebenza kwazo kunye nexabiso lentengo eyenziwa ngabasebenzisi abanenjongo yokuzifumana.
Kweli candelo siza kubona iimveliso ezingundoqo kwindawo ethile kamva uxoxe lwandiso zixhaphakileyo, kodwa uthengisa iinguqulelo 3x ESRI (nasasebenzayo nangoku zisasebenza, siya kugxininisa iinguqulelo ezintsha (9.2)
I-ArcGIS iqoqo edibeneyo yeemveliso ze-ESRI ezenzelwe ukwakhiwa, ukugcina nokuhlaziya kwinkqubo yenkcazelo yoluntu (i-GIS), kubandakanywa idesktop, i-server, iiwebhu kunye neenkonzo zesebe. Kuqondwa ukuba iinkampani zithenga ezininzi zezi mveliso kuxhomekeke kwizinto ezizifunayo, iimveliso ziseko ze-ArcGIS zilandelayo:
Le isethi yezixhobo zokusetyenziswa kwedesktop, ngokubanzi ukwakha idatha, ukuhlela, ukuhlalutya nokuvelisa iimveliso zokushicilela okanye ukupapasha.
Desktop yeArgGIS ilingana ne-AutoCAD kwi-AutoDesk icandelo okanye iMicstation eBentley; luncedo kwimisebenzi eqhelekileyo kwindawo ye-GIS, ukuba ufuna ukwenza ezinye izinto ezikhethekileyo kukho ezinye izandiso okanye izicelo, oku kubizwa ngokuba ukusabalala uluhlu oluvela kwi-ArcReader, kwaye wandisa kwi-ArcView, ArcEditor ne-ArcInfo. (Nangona nje umhlobo wethu uthi Xurxo, i-scalable ayinanto kakhulu kuba isicelo siyafana kunye nesimo esibonakalayo esichaseneyo) nganye yezi ziko ziquka amandla okuqhubela phambili ancedisa ezinye izandiso.
Injini yeArgGIS yilayibrari yamacandelo ekuphuhliswa kwedesksi apho abaprojekthi bangakha izixhobo ezinomsebenzi olumiselweyo. Ngokusebenzisa Injini ye-ArcGIS, abaphuhlisi bangakwazi ukwandisa ukusebenza kwiisicelo ezikhoyo okanye ukwakha izicelo ezintsha kwimibutho yabo okanye ukuzithengisa kwabanye abasebenzisi.
I-ArcGIS Server, i-ArcMS kunye ne-ArcSDE zisetyenziselwa ukudala nokusebenzisa izicelo ezisekelwe kwiseva, ezahlulelana nokusebenza kwe-GIS okanye kwi-intranethi okanye ihanjiswe esidlangalaleni. ArcGIS Server sisisicelo esisisiseko esisetyenziselwa ukwakha izicelo ze-GIS ukusuka kwicala leseva kwaye zisetyenziswe ngabasebenzisi ngaphakathi kwenkampani kunye ne-interfaces kwiwebhu. ArcIMS Inkonzo yemephu yokupapashwa kweedata, iimephu okanye imethadatha kwiwebhu isebenzisa iinkqubo eziqhelekileyo ze-intanethi. ArcSDE uyiseva yolwazi oluphambili ukufikelela kwiinkqubo zolawulo lweenkcukacha zendawo yolwazi kwiinkcukacha zolwazi. (Ngaphambi kokuba senze enye the lekisa ezi IMS iinkonzo)
ArcPad ihamba nefowuni yomnxeba engasenasistim isetyenziswa ngokubanzi ukubonisana okanye ukuqokelela idatha kunye nolwazi kwintsimi, isetyenziswe ngokufanelekileyo kwizixhobo ze-GPS okanye kwi-PDA. I-Desktop ye-ArcGIS kunye ne-ArcGIS Injini esebenza kwi-laptop okanye ithebhulethi isetyenziselwa ukwenza imisebenzi efuna ukuqokelela, ukuhlalutya kunye nokwenza izigqibo zedatha.
Zonke ezi nkqubo zisebenzisa i-geodatabase ingqiqo, yile umgangatho lweziseko zengingqi ye-ArcGIS (ifomathi efana ne-ESRI, kunye nokunciphisa ukutshintsha kwayo rhoqo phakathi kweenguqulelo). I-geodatabase isetyenziselwa ukumela izinto ezisemgangathweni zehlabathi kwi-ArcGIS kwaye zigcinwe kwisiseko sedatha. I-geodatabase isebenzisa ingqiqo yezoshishino njengesixhobo sezixhobo zokufikelela nokulawula idatha yolwazi.
I-ArcView yinkqubo yesiseko ye-ESRI ukujonga, ukulawula, ukudala nokuhlalutya idatha yendawo. Ukusebenzisa iArcView uyakwazi ukuqonda imeko yendawo yedatha, ukuvumela ukuba ubone ubudlelwane phakathi kweendlela kunye nokuchonga iipatheni zokuziphatha. I-ArcView inceda imibutho emininzi ukwenza izigqibo ngokukhawuleza.
I-ArcView yinkqubo ephathekayo yolawulo kwedatha yedeskithophu (GIS) emhlabeni jikelele kuba inika indlela elula yokusebenzisa idatha. Ngeendlela ezininzi zokufuzisela kunye neendawo zokuhlala ungakwazi ukudala imephu ephezulu yeemephu. I-ArcView yenza ulawulo lweedatha, ukulungiswa okuyisiseko kunye nemisebenzi enzima kuncediswa ngabantu abahlukahlukeneyo kwimibutho. Cishe phantse naliphi na umnini-nkcukacha wenethiwekhi ingenza ulwazi lwakho lufumaneke kwiifom zeArcView ezihambelanayo. Yaye kunye nokuba idatha ingabandakanywa kwimithombo eyahlukeneyo, iiprojekthi zingeniswa ngendlela efanelekileyo kunye nedatha ekhoyo kwikhompyutha okanye kwi-intanethi. Ixabiso lelayisensi yeArcView iya kwi $ 1,500 kwi-PC kunye ne-$ 3,000 yelayisenisi ejikelezayo. Kukho ezinye amanani athile koomasipala.
I-ArcView yenza lula uhlalutyo olunzima kunye nemisebenzi ekulawuleni kwedatha, ukuvumela ukubonakaliswa kwemisebenzi njengemizekelo ebonakalayo ngaphakathi kokuhamba komsebenzi. I-ArcView kulula ukuyisebenzisa ngabasebenzisi abangabalulekanga, kwaye abasebenzisi abaphambili baya kukwazi ukusebenzisa izixhobo zabo ezizodwa kwimifanekiso ye-cartography, ukuhlanganiswa kwedatha kunye nohlalutyo lwendawo. Abaphuhlisi bangakwazi ukwenza i-ArcView ngokusetyenziswa kweelwimi eziqhelekileyo ezisetyenziswa kwishishini lokucwangcisa. I-ArcView iyithuluzi elifanelekileyo lomsebenzi wedeskithophu, phakathi kweempawu zayo ezikhethekileyo kunokukhankanywa:
Ukulawulwa kwedatha yelizwe kunye nokwenza izigqibo ezingcono
Jonga kwaye uhlalutye idatha yendawo ngeendlela ezintsha
Ukwakha iikopi ezintsha zeenkcukacha zelizwe ngokukhawuleza kwaye ngokukhawuleza
Yenza imephu yokupapashwa okanye ukuhanjiswa komgangatho ophezulu
Ukulawula iifayile, iinkcukacha kunye nedatha ye-Intanethi kwisicelo esisodwa
Yenza ngokwezifiso i-interfaces ngokwemisebenzi yabasebenzisi abafuna ukudibaniswa nomsebenzi.
I-ArcEditor yinkqubo epheleleyo yezicelo ze-GIS ukuhlela nokusetyenziswa kwedatha yelizwe. I-ArcEditor inxalenye yepakethe ye-ArcGIS kwaye ibandakanya yonke imisebenzi yeArcView kwaye iqulethe ezinye izixhobo zokuhlela ulwazi.
I-ArcEditor inenzuzo yokuxhasa oomnye kunye nabasebenzisi abaninzi abasebenzayo kwinkqubo yokusebenzisana. Isethi yezixhobo ziyakwandisa amandla abo okucoca nokutya kwedatha, kunye nokulawulwa kweengongoma ezinzulu kunye nokugcina idatha eguqulelwe. Ixabiso lelayisense yeArcEditor yi-$ 7,000.
Ezinye zezenzo ezingasetyenziswa neArcEditor zi:
Yakha uphinde uhlele iimpawu ze-GIS nge "CAD style" izixhobo zokuhlela izixhobo
Yakha izityebi ezinobuninzi beendawo zolwazi olusebenzayo
Iimodeli eziyinkimbinkimbi, iimveliso zokusebenza ezininzi
Ukwakha nokugcina ingqibelelo yendawo, kubandakanya ubudlelwane be-topology phakathi kweempawu zeendawo
Ukulawula nokuphonononga i-geometries ngendlela yeenkqubo zenethiwekhi
Ukwandisa umveliso kwiphephancwadi
Ukulawula imo yendalo yendalo kunye nedatha ngokuguqulwa kwenguqulo
Ukugcina ingqibelelo lwesithuba phakathi maleko weendawo nomkhosi logic iinkqubo ethandwa ojolise proceos ulondolozo qwa nokuhlaziya data.
Ukusebenza ngedatha kunqanyulwa, ukuhlela kwintsimi kunye nokuvumelanisa okulandelayo.
I-ArcInfo ithathwa njengenkqubo epheleleyo kakhulu yokulawula ulwazi lwemihlaba (GIS) efumaneka kwi-ESRI. Oku kuquka konke ukusebenza kweArcView kunye neArcEditor, ngaphezu koko kuqukwa nezinto eziphambili ze-geoprocessing kunye nolwazi olongezelelweyo lokuguqula idatha. Abasebenzisi be-GIS abaSebenzi basebenzisa i-ArcInfo yokwakhiwa kwedatha, imodeli, ukuhlalutya kunye nokubonisa imephu kwesikrini kunye nokushicilela kokugqibela okanye iimveliso zokuhambisa. Ixabiso lelayisensi ye-ArcInfo yi-$ 9,000.
ArcInfo, kunye nemisebenzi yayo ngaphakathi kwiphakheji efanayo (ngaphandle kwebhokisi) inegunya lokudala nokulawula inkqubo ye-GIS enzima. Lo msebenzi ufikeleleka phantsi koqwalaselo olubanjwe "kulula ukuyisebenzisa", okanye ubuncinci ukuba lunokuqatshelwa ngokusasazeka kwalo okuye kuncitshiswe imveliso yekharityhulam yokufunwa kwayo. Ezi zixhobo zizenzekela ngokwezifiso kwaye zenzeke ngeemodeli, izikripthi kunye nezicelo zenkcubeko.
Ukwakha imodeli engqongqo yee-geoprocessing yamashishini afanelekileyo, uhlalutyo lweenkcukacha kunye nokuhlanganiswa kolwazi.
Phunyelela i-vector superposition, ukufutshane kunye nohlalutyo olusisiseko.
Ukuvelisa imicimbi kunye neempawu ezingqinelanayo kunye neziganeko ezigqithisiweyo kunye neempawu ezahlukileyo.
Ukuguqula idatha ukuya nakwiifom ezahlukeneyo.
Yakha idatha eneenkcukacha kunye nemizekelo yokuhlalutya, ukukhutshwa kunye nezikripthi ukwenzela i-GIS inkqubo.
Shicilela iimephu zeemephu ze-cartographic usebenzisa iziboniso ezandisiweyo, ukuyila, ukuprinta nokusebenzisa ubuchule bokulawula idatha.
...phucula... Iinguqulelo zokuqala ze-ArcInfo zisekelwe kwimida yokugcina imida ye-centroid, efana neengcamango ze-Microstation Geographics kwaye ezi zibizwa ngokuba yi-coverage (into inokwabelwana ngayo). Iinguqu ze-9.2 asinayo loo logic, kodwa kunoko iguqule umxholo wefayile yefom.
...phucula... Nangona ESRI unawo izixhobo athandwa kakhulu kwi emarikeni, amaxabiso zidla ibe ngumba umda abaninzi opt kuba iliso patch :), kodwa ukubaluleka ngokukhankanywa ngokusindisa ukuba inkampani enkulu igcina uzinzo of a trend zeteknoloji (nangona simse), ububi kunjalo kuyimfuneko eqinisekisa ukuba yehle igophe ukufunda ... aunqeu kukho ezinye iindlela.
Kwisithuba esilandelayo siya kuhlalutya Izandiso zeArgGIS.
Ukuthenga iimveliso ze-ESRI, ungabonisana GeoTechnologies e-Central America kunye neGeo Systems eSpain
Post edlulileyo«Edlulileyo Njani ivoti yezinto ezimangalisayo ze-7, uJanuwari 2008
Post Next Izandiso zeArgGISOkulandelayo "
Iimpendulo ze-15 "kwimveliso ye-ESRI, yintoni na?"
Felix Mediavilla uthi:
Indlela yokuvula ifayile ye-Dwg ye-Autocad LT kwi-ArcGis 9.2
Ingelosi david, kufuneka uqhagamshelane ne-ESRI kwaye ucele ilayisenisi, ininshurensi enenombolo yomkhiqizo kwibhokisi yokuqala kwaye ngokuqinisekileyo ubhalisile emva kokuthumela i-imeyili kwi-ESRI, ngoko kufuneka ibhaliswe egameni lakho
Ukuba ilayisensi yakho yeyentsusa, xa ufaka, kukho ukhetho lokufaka umphathi weelayisensi, ofaka iilayibrari eziyimfuneko. Nangona kunjalo, ndiyaqonda ukuba inkxaso ye-ESRI kufuneka ikuncede koku.
Ingelosi david ibarra mendez uthi:
Okokuqala ukuhalalisela kwi-pagima, ndinombuzo, jonga ndinelayisensi ye-arcview 8.3, kodwa fomatha i-maq. kwaye ngelishwa ndilahlekelwe yifayile esebenzisa iseva yelayisensi, kwaye andazi ukuba ndiyiphinde ndiyifumane, ilayisenisi edadayo koomatshini be-3 kunye ne-horita kuba andinayo indlela yokusebenza, ndinazo zonke iidiski zenkqubo, kodwa akukho nto izayo, enkosi phambili
Ewe, kukho ezinye izinto ezininzi ongayenza kunye nezinye izicelo.
Ukuba unako ukusibekela uqeqesho, ungaphuthelwa ithuba, kodwa qiniseka ukuba uthatha inkcazo yento onokuyenza ibe yimveliso kwaye unokufumana ilayisenisi.
Kwento oyenzayo, iArcMap inokuba ingaphezulu kokulingeneyo, ukuba into onayo yeyedesika. Yenza iimephu, ziprinte, zibonise, uzihlaziye.
Ukuba usufuna ukulawula idatha yokushicilela kwiwebhu, inyathelo liya ku-ArcIMS, nangona kunjalo, ukuphuculwa kwekhompyutha kunye nemali eninzi kubandakanyeka, kuba iilayisensi zibiza.
Ngenjongo yokufakela idatha kwintsimi, ngepokothini okanye kwi-PDA uze ukhutshwe kwi-PC, inyathelo liya ku-ArcPad.
Ngenjongo yokubonisa ukuboniswa kwinqanaba le-3, ukuhamba kwendiza yomoya kunye nezinto ezintle, isinyathelo siza ku-ArcGlobe kunye nohlalutyo lwe-3D
Kuya ufuna wena ungenza ntoni ... kodwa ukuba uhlawula iikhosi musa ukulahlekelwa ngabo kwaye ukuba bakwazi ukuthenga iimvume, bekuya kuba isigwebo Arc2Earth, nto leyo imali eninzi kakhulu yaye ikuvumela ukudibanisa ku Google Earth
Amelieast: mmm, andiqinisekanga ngombuzo wakho, ndincoma ukuba uthumele umbuzo kuwo Iforamu yeGabriel Ortiz , ngokuqinisekileyo baya kukunceda kakhulu.
Ndiyabonga, ukuba ndiyiqonda kakuhle ... I-Arc Gis ibheka ngaphakathi kwi-Arc Reader, iArc Scen, iArc Globe, iArc Catalog kunye neMephu ye-ARC esebenza xa ibizwa ngokuba yiArc View.
Ndingumtsha usebenzisa isofthiwe, nangona ndicinga ukuba ndihlale ndinyaniswe kwiMaphu yaseArc, yintoni enye enokuyihlola kunye nokufezekisa nezinye izixhobo?
Ngoku ndifumana ithuba lokucela ezinye iikhosi kodwa yintoni? Ndiyakwazi ukunyusa ulwazi lwam. Ukuba ngumsebenzi ochanekileyo kunye namanqaku eziko lonke ilizwe lam kwaye yintoni enye engayifumana iJusi kule nkqubo?
Ngokufanayo akuyona indawo efanelekileyo yokubuza le nto, ngoko ndilapha ezandleni zomodareyitha kwindawo engcono.
Kwi-ArcGis, xa udibanisa kwaye uzama ukuwunqumla, ulahlekelwa isisombululo esininzi, ngaba umntu uyazi ukuba kunokwenziwa njani ukuze uhlale ekhangele kangangoko kunokwenzeka?
Ukwenza ngokusebenzisa umphathi welayisenisi
Kwi desktop yakho yedesktop:
ikhaya / iiprogram / i-ArcGIS / umphathi welayisenisi / amathuluzi okulawula imvume
emva koko kwiphaneli esebenzayo, uya "kwimeko yeseva" emva koko ukhethe "ukudwelisa zonke iilayisensi ezisebenzayo" kwaye ucinezele iqhosha elithi "ukwenza imeko yokubuza"
Ndimele ndiluhlule iilayisensi ezikhoyo.
... ukuba i-ArcGIS ayiqhekeki ...
umntu owaziyo ngokusebenzisa umyalelo indlela yokwazi inani leelayisenisi ezinelayisenisi yiseva yelayisensi ye-arcgis
ziziphi na? kunye nalawo maxabiso ukukhuphela i-pirated haha
... iya kuba ngumgangatho we-ESRI ... umgangatho wayo, umgangatho wayo, umgangatho owodwa ...
mfutshane, umgangatho womntu. 🙁
ukubingelela nokubonga ngokukhuthaza, kufika ixesha lokuba ndifuna ukugqiba iposi
Yintoni ekufuneka ibe neendleko zokubhalwa kwithuba elide, elibanzi kunye neenkcukacha ngokubanzi malunga nosapho lwe-ESRI !!!
Ngendlela, andizange ndiyazi ukuba i-ArcPAD ifikelele kwi "Geodatabases" yemigangatho
Inkalipho, ngoku kunye neentsapho ze-Intergraph, intsapho yaseMapInfo, ...!
Ngaba kuya kubakho ubomi ngaphandle kwesoftware?
Ulungile malunga namaxabiso, ukuba abetha kanzima. Ndiyabulela ngokucaciswa kwe-arcinfo, mhlawumbi bambalwa kakhulu abantu abaye baqonda ukuba i-ESRI yanyamalala njani kumxholo wokuqala wokugubungela umsebenzi.
Xa ndibuya ukusuka kwam esinqumleko ndiya kukhangela ukucacisa ezinye.
«... oku kuthiwa yi-scalability evela kwi-ArcReader, kwaye wandisa kwi-ArcView, ArcEditor ne-ArcInfo ...»
Umntu, into ehlekisayo, ukusabalalisa kukuba xa uhlawula uvumele usebenzise isoftware ngokusebenza okungaphezulu okanye ngaphantsi? Umehluko phakathi kweDeskithophu ye-ArcGIS kwimodi yeArcView y kwimodi yeArcInfo Ngokubhekiselele kumsebenzi, kuphawulekayo, kodwa isofthiwe iyafana. Kufana nokuba emva kokuhlawula imoto, kwafuneka uhlawule iibhonasi ezininzi ukusebenzisa imimoya yemoya esele ibenayo okanye ikwazi ukusebenzisa uhambo lwe-5ª ....
Simele siqaphele ngolu polisi lwamagama, ngokuba i-ArcInfo 9.2 ayinayo iArc / INFO Workstation enamandla kwaye isetyenziswe ikakhulu yi-console kwaye isetyenziselwa i-Arc-Node topology yendabuko. Le ArcInfo yinto endithe ndayisho ngaphambili, imoto ngegesi yesihlanu inikwe amandla.
"Zonke ezi nkqubo zisebenzisa umxholo we-geodatabase, owona mgangatho wemigangatho yolwazi esetyenziswa yi-ArcGIS."
Standard ¿? Loo format ivaliwe, akukho iinkcukacha oluntu kunye nokuba utshintsho nenguqulo entsha nganye. Thina geodatabase akazange eyayidlalwa ehambelanayo buqu, ishishini, esekelwe iifayile (ein?) Yaye: elivulekileyo (hayi esithi hlela, vula nje !!!) A 8.3 9 geodatabase e ArcGIS despídete kwakhona in 8.3 ...
Kaloku, ewe, ESRI uye phambili izixhobo ezingcono kwimarike apho ukuba bavunyelwe ... singasathethi-nkqubo amaxabiso ESRI uninzi groveling ngayo integrators zabo, ubungqina akukho: akukho kunokuba liveni CEO of ESRI Spain kwitheyibhile zajikeleza babela epapashwe kwi Youtube kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, ungaziqinisela zibhekiswa ukuba ESRI akufundisayo amaxabiso ayo ngumthengi kwaye unelungelo, yamaxabiso elinyukayo ke ukuba iinkampani abahlala yinxalenye wokuthengisa iguqule iimveliso ESRI akunamandla okunikela, ukuhlala imvuthuluka zemalike. Uis njengoko ndiye phambili ezi zinto ....